Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny indostria fihaonana » IMEX America: hetsika Corporate Focus vaovao
Ireo drafitra fivorian'ny orinasa izao dia nanam-potoana malalaka hifandraisana sy hizara traikefa mandritra ny IMEX America amin'ity volana novambra ity. Hetsika manokana roa no hatao ao amin'ilay fampisehoana izay atao ny 9-11 Novambra any Las Vegas.
Vaovao amin'ity taona ity ny Corporate Focus, misokatra ho an'ny drafitra orinasa amin'ny ambaratonga rehetra.
Hotontosaina amin'ny Alatsinainy Smart io, ampandehanan'ny MPI, ny 8 Novambra 2021.
Ny session dia hanome alalana adihevitra lalina momba ny olana sy ny olana ankehitriny toy ny fitantanana ekipa, ny famolavolana fihaonana, ny fifandraisana mahomby amin'ny mpiasa lavitra, ny fahasalamana ara-tsaina sy ny fahasalamana.
Forum fihaonambe mpanatanteraka dia fihaonambem-pirenena tokana hanasana ho an'ny tompon'andraikitra ambony amin'ny orinasa Fortune 2000 ary - vaovao amin'ity taona ity - dia Fifantohana amin'ny orinasa, misokatra ho an'ny drafitra orinasa amin'ny ambaratonga rehetra. Natao tamin'ny Alatsinainy Smart, notarihan'ny MPI, ny 8 Novambra ary ireo fivoriana roa ireo dia ahafahana mifanakalo hevitra lalina momba ny olana sy olana ankehitriny toy ny fitantanana ekipa, famolavolana fihaonana, fifandraisana mahomby amin'ireo mpiasa lavitra, fahasalamana ara-tsaina sy fahasalamana.
Ny veteranin'ny indostrian'ny fihaonana sy ny mpanamora mahay Terri Breining no hitarika ny Forum fihaonambe mpanatanteraka ary i Annette Gregg, filoha lefitra zokiny, Experience ao amin'ny MPI no hitarika ny fifantohana vaovao. Ny endrik'ireo fotoam-pivoriana roa ireo dia hiompana amin'ny fianarana ara-tsosialy, handrisihana ny mpanatrika hizara sy hifanakalo hevitra amin'ny tontolo tsy miankina nefa tsy miankina.
Carina Bauer, tale jeneralin'ny vondrona IMEX, dia nanazava hoe: "Na dia vondrom-piarahamonina iray manontolo aza ny sehatry ny hetsika hetsika, dia miavaka tsara ny filan'ny vondrona manokana ary tsy misy maningana ny mpandamina orinasa.
“Nanitatra ny tolotra natolotray ho an'ny drafitra orinasa izahay tamin'ity taona ity tamin'ny alàlan'ny fanombohana ny Corporate Focus miaraka amin'ny Forum of Executive Meeting. Ireo fiaraha-mientana roa ireo dia misy fiaraha-miasa ao am-pony, manome ny fotoana hizarana fomba fijery sy hamahana olana amin'ireo matihanina sy ireo mpiara-miasa avy amin'ny orinasa manerantany. ”
Ny Inspiration Hub, fonenan'ny fanabeazana ny fampisehoana dia manohy ny resadresaka momba ny drafitra orinasa mandritra ny seho miaraka amina fotoam-pianarana: Resadresaka ifanaovan'ny orinasa: famerenana amin'ny laoniny ny indostrian'ny hetsika. Bob Bejan, Filoha lefitra orinasa, Global Events, Production Studios & Community Community, Microsoft sy Nicola Kastner, VP, Global Head of Event Marketing Strategy ao amin'ny SAP dia hizara ny zavatra niainany tamin'ny fivezivezena tamin'ny hetsika nomerika sy ara-batana, ny fanapaha-kevitra sy ny fampiasana ireo fivoriana mifangaro. , ny fanantenana sy ny filan'ny mpandray anjara amin'ny hetsika ary ny fiantraikany amin'ny famolavolana hetsika.
Ny mpividy orinasa dia 22 isan-jaton'ny mpividy 3,000 no misoratra anarana hanatrika Amerika IMEX.
Forum fihaonambe mpanatanteraka dia fanasana ho an'ny mpitantana orinasa ambony indrindra avy amin'ny orinasa Fortune 2000. Fifantohana amin'ny orinasa dia misokatra ho an'ny drafitra orinasa amin'ny ambaratonga rehetra. Samy natao tao amin'ny IMEX America izy ireo tamin'ny alatsinainy Smart notohanan'ny MPI, tamin'ny 8 Novambra.
Ny IMEX America dia atao ny 9 - 11 Novambra any Mandalay Bay any Las Vegas. Raha hisoratra anarana - maimaimpoana, kitiho Eto.